Uncedo lokuqala lokuxhatshazwa kwezigubhu
Phantse bonke oomama bexesha elizayo bafumana ezinye okanye ezinye izinto ezingathandekiyo kwi-anus. Oku kuhambelana nezibilini zomzimba kunye nezinye izifo zesalathisi esingumzekelo (umzekelo, i-anal fissures). Iimbangela zokubonakala kwazo - ukuphulwa kwegazi kwi-pelvis encinci, ukunyanzeliswa kwe-intra-esiswini kunye nokuqhaqha. Ngokuqhelekileyo, unyango olulodwa alufunwa. Kufuneka kuphela ukuba uqaphelisise ucoceko kwaye uzame ukuphepha ukubonakala kokubanjwa. Kule meko, emva kokubeleka, uya kulibala malunga nengxaki kwiminyaka emininzi. Nangona kunjalo, kukho imeko xa kuyimfuneko ukubonisana neengcali ngokuqeshwa kwamachiza akhethekileyo. Kuyinto enqabile kakhulu ukunyanga kwonyango. Uncedo lokuqala ekugqibeleni i-gemmoroya-isihloko sesicatshulwa.
Nini ukuya kudokotela?
Ngokuqhelekileyo abafazi abaneengxaki ze-thrombosis zangaphandle zifuna unyango olukhethekileyo. Kule meko kubaluleke kakhulu ukuba ukhumbule ukuba ezininzi iziyobisi ezinomsebenzi osebenzayo zinokulimaza umntwana, ngoko ke umgangatho osemgangathweni, "amaqhinga" okwelapha oomama abaza kungafaneleka. Kule meko, kubalulekile ukubonisana neengcali. Xa kuvela khona nayiphi na impawu zeklinikhi (i-dysfortfort, intlungu, ukuvutha komlilo, ukwabiwa kwegazi kunye ne-slide kunye nesihlalo) kuyimfuneko ukulungisa ngokukhawuleza ugqirha-proctologist kwaye nonke ukuba ungabandakanyeki kwi-selftreatment. Musa ukuba neentloni "zokugula okungcolileyo". Esikhundleni sokukhathazeka ngokuzenzekelayo kwiimpawu ezimbi ngexesha elide lobomi, unokuzama ukuphelisa ingxaki nangethuba lokukhulelwa.
Kwizigaba zokuqala zezigulane ezingapheliyo kunye nesifundo esiyingozi sesi sifo, indlela yokugcina unyango isetyenziswa rhoqo. Kukhona amalungiselelo enkqubo kunye neendawo zendawo. Eyokuqala isetyenziswe kwimiqulu yamacwecwe kunye namaconsi, okokugqibela - ngohlobo lwe-ointments kunye ne-suppositories. Unyango lwengingqi lunceda ukuyeka ukuphuma kwegazi, ukunciphisa ubuhlungu nokuphelisa ukuvutha. Nangona kunjalo, kude kube ngoku, izilungiso zezokwelapha azizange zivelise izilungiso ezicacileyo zokukhetha ezi okanye ezinye iziyobisi kwiimvumba, kwaye oogqirha bachaza amayeza akhokelwa ngamava abo ekliniki. Ngoko ke, kuphela oyingcali onokukhetha unyango olufanelekileyo.
Ukuthintela ukuphuhliswa kwezibilini kunye nokuququzelela indlela yokuhamba kwayo kuya kukunceda amanyathelo okukhusela - ukutya okunempilo, ukuzivocavoca nococeko lomntu.
• Ukuxhatshazwa ngokusetyenziswa kakubi kokutya okunesonka kunye neziyobisi, okongeza ingozi yesifo. Ukukhulelwa lixesha elifanelekileyo lokuhamba ukutya okunempilo. Ukuphelisa ngokupheleleyo utywala kunye nokunciphisa inani elibukhali, ukubhema, izitya ezicocekileyo. Yongeza ukunambitheka kokutya okunambithekileyo kuwe kuya kunceda iparsley, idill, thyme, rosemary, basil.
• Phuza amanzi amaninzi. Kwisiqingatha sokuqala sokukhulelwa - ukuya kuma-2 ilitha omninzi ngosuku. Kwisiqingatha sesibini - 1.2-1.5 ilitha ngosuku. Musa ukulibala malunga ne-cellulose. I-fiber yeetya ifunyenwe kwimifuno eninzi eluhlaza kunye neziqhamo, kwiimveliso ezenziwe kwi-rye rye kunye nomgubo we-bran, kwi-prunes, i-oats, i-buckwheat ne-hareyi. Imiqhaqhaqha ekhuselekileyo inceda ukunqanda ukutshatyalaliswa, rhoqo ngexesha lokukhulelwa kunye negalelo ekubonakaleni kwamathambo. Ukunciphisa ukusetyenziswa kwee-carbohydrates elula: iimveliso ezivela kumgubo omhlophe ococekileyo kunye neesekese.
Ukutya okunomdla kubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuba umzimba usetyenziswa kwisigqi esithile somsebenzi kwaye akukho nxiba.
Qhubeka usebenza ngexesha lokukhulelwa (i-gymnastics, yoga, ukubhukuda, uhamba), kuba ixesha elide lihlala ezinyaweni zakho, indlela yokuphila yokuhlala kunye nokuhlala kwindlela yokuphila - esinye sezizathu eziphambili zokuphuhliswa kweziqhumane. Ama-hormoric are varicose veins in the anus, ngokukodwa ngokukhawuleza ngexesha lokukhulelwa (ngenxa yokuzaliswa kwesibeletho kunye nokuqanjwa). Kubonakaliswa ngokuvuvukala, ukuvutha nokutshisa, ngakumbi emva kokutyelela indlu yangasese. Kodwa ngokusoloko eso sifo sidlula ngokungaqhelekanga kwaye sibonakaliswe kuphela ngexesha lokubeleka, esinokuyicinezela kakhulu inkambo yabo. Emva kokubeletha nokuphelisa ixesha lokuncelisa, inqaku lomfazi lijolise kumntwana. Kodwa okwangoku kulungele ukuphulaphula umzimba wakho, ukufumana iimpawu zezigulane ngexesha, ukuya kudokotela nokuqala unyango. Kakade ke, iifommitha zinganika izidakamizwa ezahlukahlukeneyo ngexesha elilodwa, kodwa, mhlawumbi, igama elithi "i-hemorrhoids" liya kubakho uluhlu lwezinye izifo, apho eli liyeza linceda khona. Ayikho inkohliso, kukho incinci "kodwa": ayikho into yokuba le mafutha okanye loo makhandlela aya kunceda, kuba ukubonakaliswa kwesi sifo kuba ngabanye.
Konke malunga nesithako esingokwemvelo - ioli ye-shark yesibindi, enezinto ezininzi ezixabisekileyo:
♦ unceda ukunqanda igazi nokuphilisa amanxeba
♦ ivuselela iinkqubo zokuvuselelwa
♦ inempembelelo yokuzibulala.
Ioli efunekayo yeJava kunye ne-lemon verbena
Amanyathelo okuthintela ukulawulwa kwegciwane lesifo sengculazi
Iimpawu zokuzalwa emzimbeni kunye neengozi zabo
Izindlela zokuqeqeshwa kwamazinyo ezigqityiweyo
Konke malunga neelensi zokunxibelelana kwamehlo: indlela yokugqoka kakuhle, ukulimaza nokuzuza, ukuphononongwa
Ukupheka kwama-raspberries ebusika-ngaphandle kokupheka, i-Pyatiminutka, i-jams, i-jams. I-rapberry compote kunye ne-liqueur ebusika
Ungayeka njani ukubethelela izipikili zakho
I-Cheesecake kwisitayela saseNew York
I-acid plant plant
I-Horoscope ye-Cancer-wesifazane ngo-2016 - uthando kunye nomnyaka wokuzalwa
Uphangiwe, unethamsanqa namadoda
I-pedicure yefayili ekhaya
I-liposuction yamagqabi: izibonakaliso, ukuchasana, ubuncinane beenkqubo, iingxaki
Ngaba abazali banelungelo lokubetha abantwana
Ukuqhuba imoto: iingcebiso ezisebenzayo
Ukukhulula imini emanzini
Iibhisikidi zepukile ezineqabunga lemon